Ingabe Iwebhusayithi Yakho Ikhuluma Njengama-Amazon?
NgoLwesihlanu, Mashi 10, 2017 NgoMsombuluko, Mashi 13, 2017 UMuhammad Yasin
Wagcina nini ukukubuza ukuthi ungubani? Mhlawumbe lapho uqala ukubhalisela i-akhawunti yakho ye-Amazon, akunjalo? Kwakudala kangakanani lokho? Yilokho engikucabangile!
Lapho nje ungena ngemvume ku-akhawunti yakho ye-Amazon (noma mane uvakashele isayithi labo uma ungene ngemvume), ikubingelela ngokushesha ekhoneni elingakwesokudla. Ama-Amazon awakukhonzeli nje kuphela, kepha akhombisa ngokushesha izinto ezifanele: iziphakamiso zomkhiqizo ngokususelwa kuzintshisekelo zakho, umlando wokuphequlula, kanye nohlu lwakho lwezifiso. Kunesizathu esenza i-Amazon ibe yindawo yamandla ye-eCommerce. Ikhuluma nawe njengomuntu, futhi HHAYI ukuthanda iwebhusayithi… futhi kuyinto brand eziningi okufanele zihlanganyele kumawebhusayithi wazo.
Uma kwenzeka ungakaqapheli, amawebhusayithi amaningi anenkumbulo yesikhashana esedlulele. Akunandaba ukuthi uvakashela kangaki iwebhusayithi ethile, ungahle uzithole ufaka imininingwane yakho kaninginingi. Noma ngabe ulande i-eGuide enhlanganweni (ngemuva kokugcwalisa imininingwane yakho), bese uthola i-imeyili ekumema ukuthi ulande i-eGuide elandelayo, kungenzeka uzithole usufanele ugcwalise imininingwane yakho futhi. Kumane… kunzima. Kuyafana nokucela umusa kumngane wakho bese uthi kubo “ungubani futhi?” Izivakashi zeWebhusayithi ngokusobala azithukwa ngomqondo ongokoqobo - kepha iningi liyakhathazeka.
Njengabantu abaningi, ngikwazi kahle ukukhumbula ubuso, kepha kubi ukukhumbula amagama - ngakho-ke ngenza umzamo wokubambisana wokubakhumbula ngekusasa. Uma ngithole ukuthi ngikhohliwe igama labo, ngizolibhala phansi ocingweni lwami. Ngenza konke okusemandleni ami ukubhala phansi imininingwane eyengeziwe koxhumana nabo njengokudla okuthandayo, izinsuku zokuzalwa, amagama ezingane, njll - noma yini ebalulekile kubo. Kuyangivimba ekutheni ngibabuze kaninginingi (okuluhlaza) futhi ekugcineni, abantu bayawuthokozela umzamo. Uma okuthile kunenjongo kothile, ngifuna ukuqinisekisa ukuthi ngiyakukhumbula. Amawebhusayithi akho kufanele enze okufanayo.
Manje, masithembeke kithina uqobo - noma ngabe ubhala yonke into phansi, ngeke ukhumbule yonke imininingwane ebalulekile. Kodwa-ke, unethuba elikhulu kakhulu lokukhumbula imininingwane eminingi uma wenza umzamo. Amawebhusayithi kufanele enze okufanayo - ikakhulukazi uma efuna ukuzibandakanya kangcono nabathengi, athole ukwethenjwa kwabo futhi babone ukuthengiselana okuningi.
Yize eyisibonelo esisobala kakhulu, i-Amazon akuyona ukuphela kwewebhusayithi ekwenza ucabange phambili unembeza. Ziningi izinhlangano ezikhethe ukuthi kubaluleke kangakanani yenza okuhlangenwe nakho kwabo oku-inthanethi kuhlanganyele kakhulu futhi kucabangele okuningi. Nakhu okumbalwa engingakusiza kalula nje:
Lapha ku-PERQ, siqale ukusebenzisa BuzaNicely - uhlelo oluqoqa impendulo engenzeka nge-a I-Net Promoter Score nge-imeyili. Ngezinhloso zethu, sifuna ukuthola ukuqonda okungcono kokuthi abathengi bacabangani ngobuqotho ngomkhiqizo wethu. Ucwaningo oluyizingxenye ezimbili luthunyelwa kumakhasimende ethu ngamunye. Ingxenye yokuqala icela ikhasimende ukuthi lilinganise amathuba okuba lisidlulisele esikalini kusuka ku-2-1. Ingxenye yesi-1 ivumela impendulo evulekile - ngokuyisisekelo ibuza ukuthi kungani lelo khasimende likhethe leso silinganiso, ukuthi singenza kanjani kangcono, noma ubani angamncoma. Bashaya i-submit, futhi yilokho kuphela! Ayikho indawo yokugcwalisa igama labo, ikheli le-imeyili, noma yini enjalo. Kungani? Ngoba Sivele sibathumele i-imeyili futhi kufanele ngabe sesivele sibazi ukuthi bangobani!
Ngabe ungakhuphukela ngempela kumakhasimende wezinyanga eziyi-6 +, owakha ubuhlobo obuhle naye, bese ubuza ukuthi bangobani? Cha! Noma lokhu kungeyona ukuxhumana ubuso nobuso, akunangqondo ukubabuza imininingwane osuvele unayo. Njengomuntu obefuna ukuthola ama-imeyili anjalo, ngiyakutshela ukuthi lapho kufanele nginikeze imininingwane yami KANYE, kucishe kube sengathi ngithengiselwa ... futhi ngikunake, sengivele ngiwuthengile umkhiqizo wakho . Ungangibuzi ukuthi ngingubani ube usungazi.
Ngakho-ke, ukubuyela ku-AskNicely - ikhasimende lichofoza ku-imeyili, likhethe inombolo ephakathi kuka-1-10 bese linikeza impendulo eyengeziwe. Lolo lwazi luthunyelwa enhlanganweni eqhuba lolo cwaningo, lapho lungakwazi khona ukubhekelela kangcono izidingo zalelo khasimende ngokuzayo. Amaphuzu abo afakwa ngokushesha kuphrofayili yekhasimende labo.
Zama Isivivinyo Samahhala se-AskNicely
Uma ungumakethi, noma ungumnikazi webhizinisi le-eCommerce, amathuba mahle kakhulu ukuthi uyazi ukuthi ngubaniI-Formstack kuyinto. Uma ungazi,I-Formstack iyinkundla evumela amabhizinisi ukuthi azenzele amafomu awo aku-inthanethi futhi aphathe imininingwane eqoqiwe. Leyo yimibandela ye-layman, okungenani. Ipulatifomu iyinkimbinkimbi kakhulu kunalokho (njenge-AskNicely is), kepha ngizobheka ezinye zezici ezenza ithuluzi elikhulu lokuzibandakanya.
Ngokuhamba kwesikhathi,I-Formstack wenze umzamo wokuhlanganisa ubuchwepheshe obuvumela amafomu e-static ukuthi angacaci kangako. Ngokuhambisana nezinto ezenziwe ngokwezifiso zepulatifomu, amabhizinisi nawo angenza ngendlela oyifisayo indlela amafomu akhonjiswa ngayo kubasebenzisi. Isibonelo: kuya ngokuthi umsebenzisi uligcwalise kanjani ifomu langaphambilini (noma isigaba sangaphambilini sefomu),I-Formstack ingasebenzisa “Ukufomatha Okunemibandela” ukubonisa imibuzo eyenza umqondo ophusile walowo msebenzisi ukuthi uphendule. Eqinisweni, eminye imibuzo ingeqiwa ngokuphelele. “Ukufomatha Okunemibandela” kusetshenziselwa ukusiza ukwenza lula inqubo yokugcwalisa ifomu nokukhuphula amazinga okuqedela. Kuhle kakhulu, akunjalo?
Manje, maqondana nokuzibandakanya namakhasimende wamanje kuya,I-Formstack inenketho yokusebenzisa "Izinkambu Zefomu Yangaphambi Kokugcwala Kwabantu." Njengoba ngishilo phambilini, kunzima kakhulu ukubuza abantu onobudlelwano ukuthi bangobani. Kuyaxaka. Futhi noma ngabe awucabangi ukuthi “kuyaxaka,” izivakashi zewebhusayithi azithandi ukuthi ugcwalise yonke imininingwane yazo yokuxhumana kaninginingi. Kubantu asebevele bezibandakanya nebhizinisi lakho, ungalwenza ukuze imininingwane yokuxhumana nabathengi ikopishwe ngokoqobo kusuka kolunye uhlobo kuye kolunye. Akufani neze nokungakhonjiswa kwefomu nhlobo, kepha impela isiqalo esihle.
Enye inketho ukuthumela ifomu elihlukile lama-URL athi ifomu kumsebenzisi othile noma kumakhasimende. Lawa ma-URL atholakala kakhulu kuma-imeyili okuthi “Ngiyabonga” futhi ajwayele ukuqondiswa kuzinhlolovo ze-Follow-Up. Esikhundleni sendawo yokufaka igama, i-imeyili noma inombolo yocingo, igxumela embuzweni wokuqala. Azikho izingeniso - ukuxhumana okusebenzayo kuphela.
Ngenkathi ngingeyona i Xbox umsebenzisi, ngiyazi abantu abaningi abanjalo. Omunye wamalungu eqembu lami, uFelicia (Uchwepheshe Wokuqukethwe kwe-PERQ), umsebenzisi omuhle kaningi. Ngaphandle kokukhetha okubanzi emidlalweni, uFelicia uthanda isikhombimsebenzisi somsebenzisi se-Xbox One samanje - okubandakanya kakhulu futhi okwenzelwe wena uqobo.
Uma usebenzisa i-Xbox (noma i-PlayStation, yalolo daba), kuyisiko ukudala iphrofayli ye-gamer - zombili ngenhloso yokuhlukanisa abasebenzisi abahlukile kanye nemidlalo eku-inthanethi. Okumnandi ngale maphrofayili we-gamer ukuthi i-Xbox interface ikuphatha njengomuntu. Lapho nje ungena ngemvume, ubingelelwa ngokoqobo ngokuthi “Sawubona Felicia!” noma "Sawubona, Muhammad!" esibukweni (futhi sizokutshela ukuthi "Sala kahle!" uma ushiya). Ikhuluma nawe sengathi ikwazi ngokweqiniso - futhi ngokuthembeka, impela.
Iphrofayili yakho yomsebenzisi we-Xbox inedeshibhodi eyingqayizivele nazo zonke izinhlelo zakho zokusebenza, zonke izikolo zakho zemidlalo nohlu lwabo bonke abangane bakho bamanje. Okupholile ikakhulukazi ngaleplatifomu ukuthi, kanye nokukubonisa konke okwenza isipiliyoni sihluke futhi sibe mnandi, isoftware izama ukwenza isipiliyoni NGISHO NGCONO.
Into eyodwa uFelicia ayithole ithakazelisa ukuthi wayethola iziphakamiso zemidlalo nezinhlelo zokusebenza, HHAYI kangako ngokususelwa ekusebenziseni kwakhe, kepha ngokususelwa kulokho abangane bakhe ababesebenzisa njengamanje. Ngoba kunomqondo womphakathi oseduze kokududuza kwamageyimu wevidiyo, futhi abasebenzisi abaningi banentshisekelo efanayo, kunengqondo ukuphuma nokukhombisa abasebenzisi okuthile okusha. Uma uFelicia ebona ukuthi ingxenye enhle yabangane bakhe idlala i- "Halo Wars 2," ngokwesibonelo, angahle afune ukuthenga umdlalo ukuze adlale nabo. Ngemuva kwalokho angachofoza esithombeni, bese esebenzisa ikhadi eligcinwe kuphrofayili yakhe ukuthenga lo mdlalo, awulande bese eqala ukudlala.
Sesihambe ibanga elide futhi elide seligcwalisile izinsuku zokuphindaphindeka kwefomu, kepha kusenebanga elide okusamele sihambe ngalo. Kusenamabhizinisi amaningi kakhulu laphaya anomkhuba “wokuthatha imali asebenze.” Bathola ulwazi, izibalo kanye nebhizinisi abalidingayo ukuze baziphilise - kepha abazami ngenkuthalo ukugcina labo bathengi. Uma kukhona engikufundile eminyakeni embalwa edlule ekusebenzeni ku-PERQ, ukuthi abathengi bazizwa bekhululeke kakhudlwana lapho amabhizinisi eba nobuhlobo nabo. Abathengi bafuna ukuzizwa bamukelekile - kepha okubaluleke kakhulu, bafuna ukuqondwa. Lapho siqonda kakhudlwana abathengi bethu beya phambili, bayothambekela ngokwengeziwe ukuqhubeka nokwenza ibhizinisi nathi.